Ogaden News Agency (ONA) – Dagaallo Khasaare Keenay oo Dhexmaray Oromada & Canfarta.
Dagaallo Khasaare Keenay oo Dhexmaray Oromada & Canfarta.
Posted by Dulmane	/ January 25, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya xiisad colaadeed oo ka dhex aloosan qoomiyadaha Oromada iyo Canfarta oo ah laba qoomiyadood oo daris ah.
Sida xogta aan kuhelay dagaal khadhaadh oo qoomiyadaha Oromada iyo Canfarta kudhex maray xuduuda labada Gobol ay wadaagaan ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh. Waxaana sidoo kale lasheegayaa in uu jiro bara kac balaadhan.
Dagaalkan oo kadhacay magaalada Bati oo dhacda xuduuda labada Gobol ayaa lasheegayaa in ay kudhinteen 3 qof oo dhinacyadii dagaalamayay ah halka dhaawucuna uu aad ubadan yahay, sidoo kale maleeshiyaadka labada qoomiyadood ayaa lasheegayaa in ay kala dhaceen hanti badan.
Dagaalkan u dhaxeeya labada qoomiyadood ee Canfarta iyo Oromada ayaa lasheegayaa in uu sitoos ah u hurinayo taliska wayaanuhu, kaas oo qorshihiisa dagaal hurinta usoo dhiibay jawaasiis udhalatay labada qoomiyadood.
Kooxda TPLF oo sanadihii lasoo dhaafay aad mashquul ugu ahayd isku dirka qoomiyadaha dariska ah ayaa talaabadan uga gol leh cimri dheerar iyo in kacdoon wadayaashu ay kajeedsadaa, hase yeeshee talaabadan ayaa cawaaqib xumo kukeeni doonta taliska wayaanaha.
Sida aan lawada soconay kooxda TPLF ayaa sitoos ah isugu dirtay qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada kuwaas oo khasaare lixaad leh uu kadhex dhashay, sidoo kale kooxda ayaa isku dirtay qoomiyado dhowr ah oo daris ah.